ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အနီကိုးလ် Kidman ကသူ၏ပဉ္စမမိခင် ပတ်သက်. ကောလာဟလများအပေါ် commented
နီကိုးလ် Kidman ဟာအမျိုးအစားအတွက်ဆန်ခါတင်အဖြစ်ဆု "ရွှေကမ္ဘာလုံး" လက်လွတ်မနိုင်ဘူး။ အနီရောင်ကော်ဇောမင်းသမီးတွင်သူမ၏ခင်ပွန်း Keith Urban နှင့်အတူ စုပေါင်း. နှင့်သတင်းထောက်များကိုနှင့်အင်တာဗျူးတွင်အတွက်ပဉ္စမသူငယ်၏အံ့ဆဲဆဲကလေးမွေးစားခြင်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကဆိုသည်။
ရုပ်ရှင်က "ခြင်္သေ့" များအတွက်အမျိုးအစား "အကောင်းဆုံးမင်းသမီး" ရှိ "ရွှေကမ္ဘာလုံး" ရဖို့စီမံခန့်ခွဲမပြုခဲ့ရသော 49 နှစ်အရွယ်နီကိုးလ် Kidman, တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပွင့်လင်းစားဆင်ယင်လတ်ဆတ်တဲ့နွေဦး-နွေရာသီစုဆောင်းခြင်းအတွက်, တနင်္ဂနွေ otgremevshego, မဟာဖြစ်ရပ်အပေါ်ညျထငျရှား အလက်ဇန်းဒါး McQueen က။ ပါးလွှာသောကြိုးနှင့်အတူစားဆင်ယင်ခမ်းနားသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအလှဆင်နှင့် "ငါး-အမြီး" နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဝေဖန်သူများက Kidman ဘာလို့လဲဆိုတော့မာနထောင်လွှား unexplained အင်္ကျီလက်၏အငြင်းပွားဖွယ်ဝတ်စားဆင်ယင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာကိုနေသော်လည်းသူမအလွန်မထားဘဲကြီးနှင့်အဆက်မပြတ်ပြုံးတစ်အနက်ရောင်လေးကိုလည်စည်းနဲ့အစဉ်အလာညစာစားဝတ်စုံအတွက် dandy တူသူကိုသူမ၏ခင်ပွန်းမှာ flirtatious ကြည့်တစ်ချက်ပစ်။
နီကိုးလ် Kidman နဲ့ Keith မြို့ပြ
နီကိုးလ်တစ်ဦး Photocall ပရီမီယံများအတွက်ဆိုင်းငံ့မှုနှင့်ဒီဇင်ဘာလရဲ့အဆုံးမှာသညျထရာ၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာပြည့်၏မေးခွန်းကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ပါဘူး။ Kidman ဟုသူမကကလေးများရှိသည်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားမိခဲ့ပါဘူး said:
"ငါမအခြားကလေးကမွေးစားချင်ကြပါဘူး။ ငါကပိုကလေးများရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်ငါဝမ်းမြောက်စွာ, ဒီအံ့သြစရာအိုင်ဒီယာမှလှည့်ကြလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအခုရရှိပါသည်ကြောင့်ငါ့အဘို့သို့သော်လုံလောက်စွာ။ ကျွန်မခင်ပွန်းကျွန်တော်တို့ဟာပြီးသားရှိသည်ဟူသောအချက်ကို၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသင့်သည်ဟုပြောနေအတွက်အလွန်မှန်ကန်သည်။ "
နာမည်ကြီးတွေ 14 ဆံပင်ပုံစံတွေ, လုံးဝသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲသွား
အခမ်းအနားအချိန်က 100 Gala မှာသူမ၏ရည်းစား, သူမ၏မိခင်နှင့်ညီမနဲ့အတူဂျနီဖာလိုပက်ဇ်
တစ်ဦးလူနေမှုငရဲဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့ဘဝတွေကိုလှည့်ကြသူ 10 ဦးစတားမိခင်များ
ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်, အနောက်တိုင်းမီဒီယာမှာကိုးကားအတွင်းအိန္ဒိယကနေကောင်လေးတစ်ယောက်ချမှတ်ချင်နှင့်ပြီးသားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်နေကြသည်, (မင်းသမီးနှစ်ဦးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူ stepchildren ရှိပါတယ်ကဲ့သို့) ကြယ်ဇနီး shared သမီးနှစ်ယောက်ပြုစုပျိုးထောင်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
Angelina Jolie နဲ့ Gwyneth Paltrow လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်၏ Harvey Weinstein စွပ်စွဲ
သူမ၏ချစ်သူကိုထရစ်စ Thompson ကနှင့်အတူကိုယ်ဝန် Chloe Kardashian တစ်ကာမဂုဏ်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးပါဝင်ခဲ့
ပယင်းဟာ့မာ့ခ် Vystrachem နှင့်အတူရက်စွဲတစ်ခုသွား
တောင်အမေရိကအတွက်ခရီးသွားလာကလေးတွေနဲ့အတူ Gwyneth Paltrow
Lindsay Lohan နောက်ဆုံးတော့ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေရဲ့ developer များနှင့်အတူတရားရုံး၏နှစ်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရ
အစား "ဂရမ်မီ" ကို Justin ၏ Bieber ကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဖြည့်ဆည်းရန်သွား၏
ယောလ McAndrew နှင့်အတူမင်းသမီး Agyness Deyn ၏မင်္ဂလာဆောင်မှသည်အစီရင်ခံ
ဒါဝိဒ်သည် Bowie နှင့် IMAN
Meghan Markle နှင့်ကိတ် Middleton မှတဆင့် ... အီမိုဂျီတစ်ဦး "ယဉ်ကျေးမှုအာကာသ" ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်!
မင်းသမီးဂျနီဖာအမွှာနှင့်အတူ ... ကိုယ်ဝန်ရှိပါ!
Tilda Swinton အသိအမှတ်ပြုမှုထက်ကျော်လွန်ပြောင်းလဲသွားပြီ
ကြယ်ပွင့်သည်ယခင်ကကွန်ယက်ကိုထောက်ခံတဲ့သူ Keaton ဂျုံးစ်နှင့်အတူမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါရန်ငြင်းဆန်
Beetroot friedge ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မှိုကနေစလောင်းများ - မူရင်းနှင့်အရသာဟင်းချိုချက်ပြုတ်နည်းများ, ကြက်သားလိပ်နှင့် risotto
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဦးထုပ် - Fall-ဆောင်းရာသီ 2015-2016
Meghan Markle ရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောမင်္ဂလာဆောင် Pippa Middleton ဖို့ဖိတ်ခေါ်မခံမယူခဲ့ပါဘူး!
Matt Damon နှင့်သူ၏ဇနီး
ဆေးသုတ် remover ဆံပင်
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ချွေတာရကျိုးနပ်မရသောအရာ 10 အမှုအရာ,
ဘောဇဉ် grinder မှတဆင့် Quince ယို
စွမ်းအင် Vampire ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?